माटोमाथि ढुंगा सवारी !
दाङको तुलसीपुर- १५ डुरुवागाउँमा माटोको थुम्कोमाथि रहेको ढुङ्गा । लामो समयदेखि रहेको यो थुम्को हेर्न हिजोआज भीड नै लाग्न थालेको छ । स्थानीयहरू दैवी शक्तिको कारण यस्तो भएको विश्वास गर्छन् । तस्वीर : रीता लामा/ रासस
सालको पातको टपरी हुने ...
... सपना सबै हुरीले !
हुरीले रंग बदलिदिएको भरवलिया